खल्लो ! हदै खल्लो काठमाडौ खुला दिसामुक्त समारोह - WASHKhabar
खल्लो ! हदै खल्लो काठमाडौ खुला दिसामुक्त समारोह
१ आश्विन २०७६, बुधबार ०९:२९ 955 पटक हेरिएको
काठमाडौ : संघीय राजधानी रहेको जिल्ला काठमाडौ । जता गए पनि मान्छे नै मान्छे हुन्छन् । रत्नपार्कमा एक जना चाटुकारले चटक देखाउन थाल्यो भने सयौं मान्छे एकैछिनमा भेला हुन्छन् । रत्नपार्कमै तपाई हामीले देखेका छौ, एक जना मान्छे उभिएर होहल्ला गर्न थाल्यो भने क्षणभरमै मानिसको भीड जम्मा भईहाल्छ ।
तर काठमाडौ जिल्ला खुला दिसामुक्त समारोह जस्तो बृहत कार्यक्रम सहभागिताको दृष्टिकोणले अति खल्लो रह्यो । तराई लगायत अन्य जिल्लाहरुमा भईरहेको भव्य कार्यक्रम हेर्दा काठमाडौ जिल्ला खुला दिसामुक्त समारोह कुनै गाउँमा भएको कार्यक्रमसँग पनि तुलनायोग्य थिएन ।
काठमाडौमा मंगलबार भएको खुला दिसामुक्त समारोह हेरेपछि एउटा घटनाको याद आयो ।
‘एक ठाउँमा एउटा आमसभा भईरहेको थियो, एक जना नेता आँखा चिम्लेर बडो जोशपूर्वक भाषण गरिरहेका थिए रे, भरे भाषण सक्किने बेलामा आँखा खोलेर हेर्दा मञ्चको एउटा कुनामा २ जना मात्र उभिएको देखेर मनमनै धन्यबाद दिदै तीन नेताले भनेछन् ‘धन्यबाद तपाई दुई जना मात्र हुनुहुँदोरहेछ हाम्रो पार्टीको सच्चा कार्यकर्ता ।’
नेताको यस्तो कुरा सुन्ने वित्तिकै ती दुई जनाले भनेछन् ‘तपाईको कार्यकर्ता सारेकर्ता होइनौं हामी, हामी त कतिबेला भाषण सक्नुहोला र यो साउन्ड सिस्टम उठाएर लैजाऔं भनेर बसेको ।’
काठमाडौ जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा समारोहको अवस्था पनि ठिक यस्तै रह्यो । सायद सम्मान पत्र लिनुपर्ने कोही व्यक्ति नभएको भए त्यहाँ मञ्चमा बसेका अतिथि, कार्यक्रम सञ्चालक, एक – दुई जना पत्रकार र साउण्ड सिस्टम वाला मान्छे मात्र हुन्थे ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भनेर बोलाइएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल कार्यक्रम स्थलमा आउन साथ फर्किनुभयो रे ! कतिले देख्न पाए भने कतिले नाम मात्र सुन्न पाए । मञ्चबाटै बेला बेलामा उहाँको नाम उच्चारण भईरहन्थ्यो । ‘प्रमुख अतिथि कार्यक्रम स्थलमा आउनु भएपनि विशेष कामका कारण उहाँ गईसक्नुभएको छ ।’
मञ्चको आधा आसन भरिएकै थिएन । झनै दर्शक दिर्घ बस्ने ठाउँ त पूरै खाली जस्तै थियो । सामान्य कार्यक्रम हुँदा समेत अटाई नअटाई सहभागी हुने राष्ट्रिय सभा गृहमा यत्ति बृहत कार्यक्रममा समेत कम सहभागिता हुनुमा मौसमलाई कारण देखाउँदै थिए आयोजक । ‘आज मौसम पनि त्यस्तै भयो, हामीले अलि ढिला गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यौं, त्यसैले पनि हल खाली खाली देखिन्छ ।’
खुला दिसामुक्त घोषणा समारोहमा काठमाडौ जिल्लाभित्रका नगरपालिकाहरुका लागि सम्मान पत्रको व्यवस्था गरिएको थियो । तर सम्मान पत्र थाप्न बोलाउँदा समेत कतिपय नगरपालिकाबाट सम्मान पत्र थाप्ने प्रतिनिधि समेत थिएन ।
घोषणा सभाको समापन गर्ने बेलामा हल पूरै खाली भईसकेको थियो । त्यहाँ सम्मान पत्र थाप्न बसेका एक – दुई जना कर्मचारी, कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन कर्मचारी, मञ्चमा आसन ग्रहण गराईएका केही अतिथिहरु र राष्ट्रिय सभा गृहका केही कर्मचारी भन्दा कोही पनि थिएनन् ।
जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रममा काठमाडौका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख वा कर्मचारी सहभागी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? काठमाडौ महानगरपालिकाबाट मात्र हरेक वडाबाट ५/५ जनाको दरले मात्र कार्यक्रममा सहभागी भएको भए १६० जना हुन्थ्यो । झनै ११ वटै स्थानीय तहको हरेक वडाबाट यही दरमा आएको भए राष्ट्रिय सभा हल भरिभराउ हुन्थ्यो ।
काठमाडौ खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएको सन्देश सबै माझ पुग्नुपर्छ । अनि पो खुला दिसामुक्त कायम राख्न बल पुग्छ । स्थानीय तहहरुले नीति बनाउँछन् । यहाँ त स्थानीय तहले कार्यक्रम नै बहिस्कार गरे जस्तो देखियो ।
यही कार्यक्रमबाटै अनुमान लगाउन सक्छौं, राष्ट्र खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रम कस्तो हुन्छ भनेर ? यही १३ गते राष्ट्रलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी भईरहेको छ । राष्ट्र खुला दिसामुक्त घोषणाको तयारी भईरहेका बेला सहभागी शुन्यताको अवस्थाले राम्रो सन्देश पक्कै जाँदैन । राष्ट्रपतिले घोषणा गर्ने कार्यक्रममा १०/१२ जना पनि भईदिएन भने कति शोभनीय होला ? तपाई हामी आफै विचार गरौं र काठमाडौ ओडिएफ समारोहबाट पाठ सिकेर आजदेखि नै भव्य बनाउने कसरत गरौं ।
आज विश्व वातावरण दिवस,